दशैलाई खसी किन्नु भयो ? - Himalayan Kangaroo
दशैलाई खसी किन्नु भयो ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ आश्विन २०७१, बुधबार १५:४० |
चाडैंचाडको देश नेपालमा दशैं आई पुगेको छ । यसको विशेषता भनेको मासुका चौरासी व्यञ्जन, परिकार तयार गरी घरपरिवारका लागि मात्र नभई इष्ट मित्र, माइती, ससुराली खलकमा कोसेली बाँडी रमाइलो मनाउनु पनि हो । दशैंमा पुग्ने जतीमासु, त्यो मासु पसलमा किनेर नपुग्ने । आफ्नो धर्म रिती परम्परा अनुसार आफ्नो गच्छेलाई भ्याए पनि नभ्याए पनि एउटा, पशु, पंक्षीआफ्नो कुल देवतालाई बली चढाउनै पर्ने अझ अष्ठमीमा बोका त्यो पनि सकेसम्म कालै, त्यसैले भनिएछ कालरात्री, नवमी को दिन चाहियो एउटा घोर्ले खसी ।
हाम्रा गाउघर तिर त बुढा पाकाले यसपटकको दशैंमा, खसी, बोका बध पछी अर्को वर्षलाई गोठमा भएको पाठा पाठीलाई अर्को वर्षका लागि तयार पार्थे । तर आजको शहरी पुस्ताका लागि बढ्दो शहरी करणको प्रभाव खेती तथा पशुपालनका लागि चाहिने ठाउँको संकुचनले गर्दा यो असम्भव मात्र हैन दुरुह कार्य हुन जान्छ । त्यसैले मुखमा नै आएको दर्शैको लागि चाहिने खसी, बोकाको हाम्रो श्रोत कि त ग्रामिण क्षेत्रमा भएका आफन्तले खसी बोका पालेको भए कोसेली पठाइ पो दिन्छ कि, त्यो पनि विगतको विविध खाले द्वन्दका कारण के तराई के मधेश, के पहाड सवै तीरका आफन्त यही शहरमा पाहुना लागेका छन् । कि विदेश तीर छन । शहर कै कुरा गर्ने हो भे नियमित रुपमा खसी बोका किन्ने ठाउँ भनेकोे खसी बजार त छदै छ, त्यस बाहेक यस बेला बाटा, चौबाटामा पनि खसी विक्री गर्न राखिएको पाइन्छ । समस्या अलि कती मुल्यमा पर्न सक्छ । सरकारी स्तर बजार अनुगमन थालिएको छ । यस बारेमा अन्तिम निर्णय त उपभोक्ता तथा विक्रेताको समझदारीको कुरा भयो ।
शहरमा खसीको जोहो गर्न कति सहज कति असहज ?
आजको शहरको बसाई अली वेग्लै छ, घर त आफ्नो छ तर बहाल पनि लगाइएको छ । पहिले नै खसी बोका किनी ल्याउ, बहालमा बस्नेलाई झिझो लाग्ला भन्ने डर वा घर धनिले कचकच गर्ला भन्ने डर । अनी यस्को एउटा समाधान त छ त्यो के भने, घरमा साइत पनि जुरायो, पानी पनि ततायो अनी खसी बोका किन्न हिड्यो, जे मुल्यमा आफ्नो गच्छे अनुसार को खसी बोका ल्यायो अनिबली चढायो । यो नै व्यवाहारिक देखिन्छ । यदि पहिलानै खसी बोका खरिद गर्ने सोच्नु भएको छ अनि घरमा राख्ने ठाउँ पनि घरबेटी, बहालमा बस्नेको त कुरा छिमेकिले पनि कचकच गर्दैन भन्नेमा आश्वस्त हुनु हुन्छ भने ।
खसी किन्दा डम्म पेट भएका, लौ यो त खासै रहेछ भनी नकिन्नु होला । त्यस बेला खसी बोका मोटाघाटा देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएको हुन सक्छ । किनभने त्यस बेला खसी विक्रेताले यो यती किलो को है भनी मोल भाउगर्ने गर्छन । त्यती बेला खसी बोका किनी हाल्नु भयो भने घरमा ल्याई बद्य नगरिन्जेल सम्म थप अन्न खान नदिनु होला, किन भने त्यो खसी बोकाले पहिले नै जोहो गरी केको हुन्छ । अन्यथा तपाईंको खसी बोका फेरी अस्पताल पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । बरु वली चढाउने खसी बोकालाई खाली सादा पानी, थोरै मात्रामा सउलो वा इलेक्ट्रो लाइट दिए पुग्छ । त्यसो गरियो भने, त्यो खसी बोकाले पहिला खाएको अन्न, घाँस पात पचि शरीर बाट मलमुत्रका रुपमा विसर्जन गर्छ अनी तपाईले वध गर्दा त्यसको जीउमा लादीपनिकम हुन्छ । आन्द्रा भूँडी सफागर्न पनि कम झन्झटिलो हुन्छ । यस भन्दा अझ फाइदा यसमा पो छ, त्यो खसीबोकाले खाएको अन्न घाँसपात, उसको शरीरमा चयअपचयहुदा त्यसबाट उत्पन्नहुने विष विषातीक पनि उसको शरीरबाट बाहिरिएको हुन्छ । जस कारण त्यस्ता खसीबोकाबाट तयार पारेका दशैं परिकार, स्वस्थ्य पनि हुन्छन् । तपाई आफैंले वध, काटछाँट गर्नु भएको छ, मासु स्वच्छ पनि हुन्छ, सफा त त्यसै हुने नै भयो । यसो भयो भने दशैंमा तपाईले खाएको खुवााएको मासुबाट, मासुजन्य विषाक्ती हुन जोखिम कम हुनेछ ।
Previousडीभीको आवेदन आज रातीबाट खुल्ला हुने
Nextबाबुआमाको झगडाले २ महिने शिशुको मृत्यु
११ चैत्र २०७५, सोमबार १०:२१